Samsung Galaxy Watch 2 ga-enweghachi ọrụ kacha mma | Gam akporosis
Samsung Galaxy Watch 3 ga - agbake ọrụ kacha chọọ
Otu n'ime amaokwu dị ukwuu mgbe a bịara n'ịzụ igwe elekere anya bụ Samsung. Ọ bụ ezie na mbido mbụ nke ngwaọrụ ndị a adịkwaghị agbapụta ka ndị ọrụ hụrụ obere ikike ha, ụlọ ọrụ ahụ kwụsiri ike n'ahịa a na-eyiri. Na otuto Samsung Galaxy Watch ọ bụ otu n’ime nnukwu ọla ya.
Na mgbakwunye, ka anyị si kwuo okwu na teknụzụ, ndị nrụpụta smartwatch bụ isi achọpụtala ihe ngwọta maka nnukwu nsogbu batrị nke ngwaọrụ ndị a tara ahụhụ. N'ụzọ dị otu a, ọ dị mfe ugbu a ịchọta nche elekere nke ga-adịgide ruo ihe karịrị otu izu.
Ee, Samsung Galaxy Watch 2 ga-enwe bezel na-agbagharị
Dịka anyị gwara gị, Samsung Galaxy Watch bụ otu ezigbo pel nke nrụpụta. Ruo mgbe ọ banyere n'ime ezinụlọ ọhụrụ nọ n'ọrụ. A zuru ezu nso nke smart nche, ma kọrọ otu n'ime ihe ndị kasị ji mara ọcha nke Samsung wearables: ha ịrịba agbagharị bezel.
Ma ọ bụ na, site na mmewere a anyị nwere ike ịnyagharịa site na interface nke ngwaọrụ ahụ, nweta ụfọdụ ọrụ ma nwee ike ịmepe ngwa na-enweghị imetụ ihuenyo ahụ, na-ezere iwe ndị na-akpasu iwe akara na iko ahụ. Mana Samsung wepụrụ arụmọrụ a site na arụmọrụ ya. Ọ bụ ezie na anyị na-eweta ozi ọma: Samsung Galaxy Watch 2 ga-eweghachite ihe a.
Dịka anyị mụtara, Samsung Galaxy Watch 2 ka gafere akwụkwọ ikike FCC, ebe anyị nwere ike ịhụ na ọ ga-abata na ụdị 45 mm. Otu n'ime ihe ịtụnanya dị egwu ga-abụ iji bezel na-agbagharị. O yiri ka onye nrụpụta ahụ emezuru ihe ndị ọrụ rịọrọ, bụ onye rịọrọ maka nloghachi nke ihe a bara uru.
N'aka nke ọzọ, anyị maara na a ga-enwe nsụgharị nke Samsung Galaxy Watch 2 nke titanium iji mee ka e nwee nnukwu nguzogide ụdị ọ bụla. Bọchị ọ ga-ewepụta ya? N'oge a ọ bụ ihe omimi zuru oke, mana ihe ezi uche dị na ya ga-abụ iche na ha ga-eweta ya ọnụ yana atụ anya ya Samsung Galaxy Note 20 n'ime Ọgọstụ na-esote.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » smartwatch » Samsung Galaxy Watch 3 ga - agbake ọrụ kacha chọọ
Yabụ ị nwere ike rụọ ọrụ ọnọdụ desktọọpụ dị ka Samsung DeX na Taskbar yana ụdị 6.0 ya
Samsung Exynos 850: Ihe mgbaaka 4G ọhụrụ maka etiti